ko htike's prosaic collection: October 2008
Crisis Behind The Veil: Forgotten Suffering In Kachin Land, Burma
We would like to invite you to the unique event about the humanitarian crisis and human rights abuses in Kachin land.
For many decades the Kachin people have been suffering from many forms of oppression by the brutal military dictator. In 1994, the Kachin made cease-fire agreement with the Burmese military regime with the hope of finding better solutions to solve conflicts in the region. However, there is no improvement in political progress, rather the rise of poverty and human rights violation continue.
Due to the existence of cease-fire agreement, the perception of International community upon current circumstances in Kachin state has been very different from the reality. Today, in Kachin State , because of the lack of media attention, problems listed below are untold to the rest of the world:
· Exploitation of natural resources
· Increasing number of HIV/AIDs infection and narcotic drugs distribution
· Trafficking of Kachin women and girls to China
Therefore, Kachin National Organization (UK) will be hosting the event to raise the awareness of the humanitarian and human rights crisis in Kachin land. We hope to find solutions and get support from international community to help protect the lives of Kachin people and help safe our homeland that used to be preserved in most of the region before cease-fire.
Photo exhibition will be displayed which projects the evidence of the regime’s cruelty such as forced labour, environmental deterioration, HIV/AIDs and Drugs related problems, sexual abuses and other human rights violations.
After the event, you will haveachance to experience the taste of Kachin traditional food withasmall donation to support HIV/AIDs infected people including orphanage children. Complimentary tea, coffee and snacks will be provided before the event.
Speakers: Benedict Rogers (Christian Solidarity Worldwide)
Kai Htang (Kachin National Organization – UK )
Place : Lecture Theatre, New Hunts House
Date : 13th November, 2008
Time : 07:00pm – 09:00pm
Posted by ကိုထိုက် at 13:156comments
Posted by ကိုထိုက် at 12:549comments
တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်လုပ်မှုဖြင့် ကျောင်းသားခေၝင်းဆောင်များကို ထောင်ဒဏ်ချ
အမှုစစ်ဆေးနေဆဲ ၈၈ မျိုးဆက် ကေဵာင်းသား ခေၝင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်အပၝအဝင် ၉ ဦး ကို တရား႟ုံးကို မထေမဲ့မြင်လုပ်တဲ့ အမှုနဲႛ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဒီကနေႛ အင်းစိန်ထောင် အထူးတရား႟ုံးကနေ ထောင်ဒဏ် ၆ လ အပြစ်ပေးလိုက်ပၝတယ်။
ဒီကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တွေဟ္ဘာပီးခဲ့တဲ့အပတ် အမှုခဵိန်းက အမှုစစ်ဆေးတာကို မိသားစုမဵား လာရောက်ကြည့်ရှုခွင့်အပၝအဝင် ရပိုင်ခွင့်မဵား တောင်းဆ္ဘိုပီး တရားရုံးက မပေးတာကြောင့် တရားရုံးကို ပူးပေၝင်းဆောင်ရွက်မှု မပြုလုပ်ပဲ နေခဲ့ကြတာပၝ။ အောက်တိုဘာ ၂၉ရက် ဒီကနေႛ ကိုမင်းကိုနိုင်ပၝ ၂၆ဦးရဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ်အမှုနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး မစစ်ဆေးခင် ကိုမင်းကိုနိုင်ပၝ ၉ ဦးကို အရင်ရုံးထုတ်္ဘပီး ရန်ကုန်တိုင်းတရားသူကြီးက ခုလို အပြစ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပၝတယ်။ အင်းစိန်ထောင် အပြင်ဘက်မှာ စောင့်နေတဲ့ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တဦးက ခုလိုပြောပြပၝတယ်။
မိသားစုဝင်တဦး။ ။ “သူတိုႛရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေကို ထပြောတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဒီနေႛမှာ အဲဒီထဲက ကိုးယောက်ကို ခြောက်လ အမိန်ႛချလိုက်တာပေၝ့။ ပုဒ်မက သူက ပုဒ်မ ၂၂၈ပေၝ့။ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးရယ်၊ ကိုမြအေးရယ်၊ ကိုဌေးကြွယ်ရယ်၊ ပြုံးချိုရယ်၊ ဉာဏ်လင်းရယ်၊ လှမျိုးနောင်ရယ်၊ အောင်သူရယ်၊ မျိုးအောင်နိုင် ခေၞ အောင်နိုင်ပေၝ့။ အဲ သူတိုႛ ကိုးယောက်။”
အမိန်ႛချလိုက်္ဘပီးတဲ့ နောက် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ၉ ဦးကို ပြန်ခေၞသွားခဲ့ပၝတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အီလက်ထရွန်းနစ် အမှုအတွက် ကိုမင်းကိုနိုင်ပၝ ၂၆ ဦးအမှုကို ဆက်္ဘပီး စစ်ဆေးပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ အမိန်ႛချလိုက်သူ ၉ ဦးမပၝဝင်ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ်။ အမှုကို ဆက်္ဘပီး စစ်ဆေးရာမှာ ကျန်ကျောင်းသား ခေၝင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုဂျင်မီ၊ မနီလာသိန်း၊ ကိုမာကီ အပၝအဝင် ကျန်ကျောင်းသား ခေၝင်းဆောင်တွေက္ဘပီးခဲ့တဲ့ အမှုချိန်းက ကိုမင်းကိုနိုင်အပၝအဝင် မိမိတိုႛ အားလုံးဟာ တရားရုံးကို ပူးပေၝင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုဖိုႛ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တာကြောင့် အပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင် မိမိတိုႛကိုပၝ ပေးပၝလိုႛ တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။
ဒီတောင်းဆိုခဵက်ကို တရားရုံးက မလိုက်လျော တဲ့အတွက် ကေဵာင်းသားတွေက ရှေ့နေပၝဝၝများကို ရုပ်သိမ်းကြပၝတယ်။ ဒၝ့အပြင် တရားရုံးကို ပူးပေၝင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုနိုင်လိုႛ ပြောဆိုတာကြောင့် အမှုကို ဆက်မစစ်နိုင်တော့ပဲ ရက်ချိန်း ပေးလိုက်တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။
(RFA မှ ရယူထားပါသည်။)
Posted by ကိုထိုက် at 20:436comments
မြန်မာပြည်တွင်းပြည်ပမှ လေယာဉ်စီး ခရီးသည်များအတွက် အရေးပေါ် သတိပေးချက်။
မြန်မာပြည်တွင်းပြည်ပမှ လေယာဉ်စီးကြသူများ အရေးပေါ် သတိပြုစရာ အချက်အလက် အချို့ကို တာဝန်သိစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံတကာမှ အာမခံကုမ္မဏီများအားလုံး တညီတညွှတ်တည်း ဆုံးဖြတ်၍ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ စပ်တူလုပ်ကိုင်နေသော လေကြောင်းလိုင်းများ၏ အာမခံကိစ္စများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင် တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာထားပါသည်။
ဒါကြောင့် အဲဒီလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာ မြန်မာအစိုးရပိုင် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းတွင်သာ အာမခံထားနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထားရှိရန်လိုအပ်သော အာမခံတန်ဖိုး၏ မဖြစ်စလောက်သော အစွန်းထွက် တန်ဖိုးကိုသာ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းက လက်ခံ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာမှ သတ်မှတ် ထားသော အာမခံတန်ဖိုးမပြည့်မီသည့် လေယာဉ်ကို မည်သည့်နိုင်ငံတကာလေယာဉ်ကွင်းကမှ ဆင်းသက်ခွင့်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ MAI လေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့် ၊မလေးရှားနိုင်ငံမှ MAS ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ Thai Airway နှင့် jetstar စသည်တို့နှင် Code Sharing Agreement ရှိထားသောကြောင့် ပျံသန်းမည့်လေယာဉ်၏ စံသတ် မှတ်ချက် တို့ အဆင့်မှီလျှင် ဆင်းသက်ခွင့် ရနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေများဖြင့် ၀ယ်ယူထားသော နိုင်ငံပိုင်လေယာဉ်များကို Air Bagan တံဆိပ်တပ်ကာ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် သဘွယ် အလွဲသုံးစားလုပ်ထားသော ဦးတေဇ ခေါင်းဆောင်သည့်အုပ်စုက MAI လေကြောင်းလိုင်းကို အပိုင်စီးဘို့ ကြိုးစားနေသည်ဟု ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန မှအမည်မဖေါ်လိုသည့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် MAI လေကြောင်းလိုင်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော Ground Handling လုပ်ငန်းများကိုလည်း စစ်အာဏာရှင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ တချက်လွှတ်အမိန့်ဖြင့် ဦးတေဇ ပိုင်ဆိုင် သော Air Bagan လေကြောင်းလိုင်းသို့ လုပ်ငန်းတာဝန်များ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရကြောင်း DCA တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Air Bagan မှ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ် ပြေးဆွဲခွင့်မရဘဲ မြေပြင်တွင်ရပ်ဆိုင်းထားရသော လေယာဉ်တစင်းကို စစ်အာဏာပိုင် အဖွဲ့၏ အမိန့်ဖြင့် MAI မှ ငှားရမ်းသုံးစွဲနေရပါသည်။ အာမခံ မရှိသော်လည်း MAI နှင့် Code Sharing ပြုလုပ်ထား သော နိုင်ငံများမှ လေယာဉ်ကွင်းများတွင် ဆင်းသက်နိုင်ရန် ကြံစီခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါ Code Sharing ပြုလုပ်ထားသော၊နိုင်ငံများမှ လိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာ ယင်းလေယာဉ်၏ ကြံ့ခိုင်ထိန်းသိမ်းမှူ စစ်ဆေးခြင်းများကို ကြားခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ စစ်ဆေးထားသည့် ထောက်ခံချက်ပါမှ ဆင်းသက်ခွင့်ပြုနိုင်သည့်အတွက်၊ ၄င်းကြားခံအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးသောအခါ အဆိုပါ Air Bagan လေယာဉ်မှာ စိုးရိမ်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ညံ့ဖျင်းပြီး လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ လုံးဝမရှိ ဟုသောအဖြေထွက်ပေါ်လာသည့် အတွက် MAI လေကြောင်းလိုင်းတွင် အမိန့်အာဏာကို မလွန်ဆန်နိုင်သဖြင့် ဌားရမ်းသုံးစွဲနေရသည့် အဆိုပါလေယာဉ်မှာ၊ မကြာမီရပ်ဆိုင်းရ တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတ ကာမှလည်း Air Bagan သို့ မည်သည့်လေယာဉ်အပိုပစ္စည်းမှ ရောင်းချ ခြင်း မရှိတော့ပါ။
နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်ပြေးဆွဲရန် သတ်မှတ်ထားသော Air Bagan လေယာဉ်၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်း လောက်အောင် ညံ့ဖျင်းနေလျှင် ပြည်တွင်းမှာပြေးဆွဲနေသော Air Bagan လေယာဉ်တို့၏ အခြေအနေမှာ စဉ်းစားကြည့် ယုံမျှနှင့် ကြောက်စရာကောင်းလှပါသည်။
ယခုလိုအန္တရာယ်ရှိသည့် Air Bagan လေယာဉ်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ပျံသန်းခွင့်ပြုခဲ့သည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ နှင့် DCA တာဝန်ရှိသူများအား လူ့အသက်ပေါင်းများစွာသတ်ဖြတ်မည့် ရာဇ၀တ်မှုကြီး ကျူးလွန်ရန်ကြိုးစားသည့် တရားခံများ အ ဖြစ် သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။
ပြည်တွင်းခရီးသွားများ အနေဖြင့် ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်းတို့ဖြင့်သာ အနည်းငယ်အပင်ပန်းခံ၍ ခရီးသွားကြစေလိုပါသည်။ မိမိ၏အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသည့် Air Bagan လေယာဉ်များဖြင့် ခရီးသွားလာခြင်းများ မပြုလုပ်ကြပါရန် အရေးပေါ် သတိပေးအပ်ပါသည်။
(မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ Air Bagan လေယာဉ်ပျက်ကြမည့်ဘေးဒုက္ခမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။)
Important Emergency Message for Air Travelers in Myanmar
This information is dedicated to Burmese people who are willingly or unwillingly travel by air inside Burma.
All reputed insurance companies all over the world are agreed unanimously for not to issue any insurance policy towards Burma and their affiliated organizations. This is directly affected to government, semi-government and private own airlines operated in Burma.
Since International Insurance Companies are not doing business with above said airlines, only one remain for them to approach is government own Myanmar Insurance Corporation but what they can get from that company is justafriction of internationally required amount.
That insurance crisis is not directly affected to domestic airlines yet but big problem for international flight. All international airports require every flight to cover with standard insurance policy and otherwise landing permission will be denied.
Burma have two airlines operating internationally and one is semi-government Myanmar Airway International (MAI) and other is so call private own but actually all aircrafts were bought by government (tax payer’s money) and operated by Tay Za and cronies of Air Bagan.
MAI have not much problem because they already sign the code sharing agreements with the airlines of every foreign country they fly so they only need the airworthiness and proper maintenance record of particular aircraft which must be approved by auditing of certify third party.
Air Bagan can not get such priority as reputation of operation and experience are very much below standard for international air liner so notorious Tay Za try to take over the MAI by illegal but forceful order and favor of authority as he isamost trusted henchman of General Than Shwe. Please note that Tay Za is more powerful in Burma even than junta’s second man General Maung Aye. He is eye and ear of Than Shwe. Nobody dare to stop him. Ministers are afraid of him as his personal report to Than Shwe can ruin their carriers.
Tay Za took the advantage of his influence over Junta leader and grab the ground handling services in Rangoon Airport from MAI by direct order from General Than Shwe. It was learnt from anonymous executive of DCA (Department of Civil Aviation)
Air Bagan force MAI to charter their useless grounded aircraft although it’s not economical for MAI to operate but they have no other choice. MAI start using chartered Air Bagan flight and at the same time commence the auditing procedure for that aircraft. Final report came for that case and was very shameful and distressing. Report said that Air Bagan is not keepingastandard procedure for what must usually be for normal airline. Their maintenance standard is not even sufficient for domestic journey. Many parts used were overdue but no record of when it was changed and no report of necessary order to replace them.
We can imagine that the best aircraft of Air Bagan fleets was in suchachaotic condition so the others used in domestic routes were out of question. Since beginning of the operation with6aircrafts in the fleets, two were already put in the casualty list. Air Bagan can’t buy the spare-parts because of sanction but still we can see their aircrafts in the air. They never change the essential parts when were due and force them to fly. For your own sake of safety, please take the others means of transports such as road, rail and river way. Flying on the Air Bagan is the gambling with the dead. We just let the true story run for people who still flying the Air Bagan without knowing of how Tay Za is cheating.
Posted by ကိုထိုက် at 22:53 8 comments
အင်းစိန်ထောင်၊ မောင်ဝိတ်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် နအဖ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ပြီး ထောင်ကျလာသော ချမ်းသာသည့် လူတန်းစားများက ထောင်ထဲတွင် ငွေအင်အား သုံးပြီး အထူး အခွင့်အရေး ယူကြသည်မှာ အားလုံး အသိပင်ဖြစ်သည်။ ယခု အခါ တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အချမ်းသာဆုံး စားရင်ဝင် ဖြစ်ခဲ့သော မောင်ဝိတ်နှင့် သူ၏ တပည့်တပန်းများ ပျော်ပျော်ပါးပါး ထောင်ကျသည့် အခါတွင် အဆိုပါ လူတစ်စု၏ ငွေအားနှင့် နအဖ၏ အကျင့်ပျတ်ဝန်ထမ်းများ ပေါင်းကာ ဒုက္ခပေးခြင်းခံရသူများကတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများပင် ဖြစ်နေတော့သည်။
နအဖ၏ မူဝါဒ အရလည်း လူသတ်၊ မုဒိန်းကောင် ဖြစ်နေပါစေ (ကိုယ်တိုင် နအဖ အဖွဲ့ဝင်များသည်လည်း လူသတ်၊ ဒမြ၊ မုဒိန်းကောင်များသာ ဖြစ်သည်။) ထိုသူများအတွက် အပြစ်ဒဏ်သည် အရေးမကြီး၊ ယုံကြည်ချက်နှင့် တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာခံလုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံအတွက် ကောင်းမွန်ရာလုပ်ဆောင်နေကြသော လူများအတွက်တော့ ရှိသမျှ အမြင့်ဆုံးဒဏ် ခံရမည်ဟူသော မူဝါဒလည်း ရှိနေသောကြောင့် ထောင်တွင်း မတော်မတရား ဒုက္ခခံစားရသော လူတန်းစားများကတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများသာဖြစ်နေပါသည်။
အခု လက်ရှိ အချိန်တွင်ပင် မောင်ဝိတ်နှင့် သူ၏ တပည့်တပန်းများက ငွေနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို ဝယ်ယူပြီး အခြားသူများအပေါ် အနိုင်ကျင့်လျက်ရှိရာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ၏ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ အကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲ စာအုပ်ပါ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့် မညီမျှသော မတရားမှုများကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ခံစားနေကြရသည်။ (ဤနေရာတွင် အဆိုပါ လူများသည် ကနဦး အစကတည်းက မတရား ထောင်သွင်း အကျဉ်းချထားခံနေရသည်ကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါက ပို၍ မတရား ခံနေရမှုများကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။)
နောက်ဆုံးရ သတင်း တစ်ခုအရ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ဖြစ်သော အရှင်ဆန္ဒမာဂ၊ ကိုဝေလွင်မျိုး နှင့် ကိုကျော်ဇင်မျိုး တို့ (၃) ဦးသည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ၏ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ အပြင် ထိုရာဇဝတ်သားများနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ခွဲထားရေးအတွက် တောင်းဆိုမှုများကြောင့် မနေ့ညမှစ၍ စစ်ခွေးတိုက်သို့ မတရား ပြောင်းရွေ့ အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း ခံနေရသည်ဟု သိရပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 15:137comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတရား ဖမ်းဆီး အကျဉ်းကျခံရသော ၁၃ နှစ်ပြည့် ဆန္ဒပြပွဲ (လန်ဒန်)
အာဏာရှင် နအဖမှ မိမိတို့ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေကိုပင် မလိုက်နာဘဲ ဥပဒေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မတရား အကျဉ်းချထားသော ၁၃ နှစ်ပြည့်မြောက်သောနေ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခြားသောမတရားဖမ်းဆီးခံ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရန်အတွက် လန်ဒန်ရောက် သံဃာတော်များ အပါအ၀င် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များက နအဖ စစ်ဗိုလ်များ၏ ကိုးကွယ်ရာဆရာတစ်ဆူဖြစ်သော တရုတ်အစိုးရ ကိုယ်စား လန်ဒန်ရှိ တရုတ်သံရုံးသို့ အကျဉ်းတံခါးများအား ဖွင့်နိုင်သော သော့အား အထိမ်းအမှတ်ပြုသည့် သော့တစ်ချောင်း ပေးအပ်သော ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 15:26 8 comments
The 88 Generation Students ReceivedaMajor International Award
Influential United States Teachers' Union Gives Major Award to Burma's Student Activists
Contact: Jeremy Woodrum at (202) 234 8022
(Washington, DC) The American Federation of Teachers, the largest organization representing teachers and educational workers in the United States (with more than 1.4 million members) has awarded its "2008 President's International Democracy Award" toaleading Burma's pro-democracy group, the "88 Generation Students". The 88 Generation Students group is led by prominent Burmese democracy leader Min Ko Naing, who is locked up asapolitical prisoner in the Southeast Asian country of Burma. (The award certificate is attached.)
The AFT announced the award at its national convention, held on July 12, 2008 in Chicago, Illinois. At the event, Democratic Presidential Candidate Senator Obama wasakeynote speaker.
Since Min Ko Naing and the other leaders of the 88 Generation Students are locked up as political prisoners in Burma, AFT has sent the award to the U.S. Campaign for Burma to keep until it can be delivered to the 88 Generation Students. USCB will proudly maintain the award.
"We are honored to keep this award on behalf of the 88 Generation Students", says Aung Din, executive director of the USCB and close friend of the '88 student leaders since Burma's 1988 popular democracy uprising. "This award recognizes the enormous courage and sacrifice of Burma's students in the struggle for democracy and human rights," he added.
The 88 Generation Students group is comprised of Burma's most prominent human rights activists after Nobel Peace Prize recipient Aung San Suu Kyi. After Burma's military regime drastically raised the price of fuel in August 2007, the 88 Generation Students organizedanon-violent protest walk in which they were joined by hundreds of everyday Burmese people. The 88 students were immediately arrested and have been held ever since. Anger at the arrests and the Burmese regime's treatment of Buddhist monks spiraled into last September's "Saffron Revolution" that saw hundreds of thousands of Buddhist monks marching peacefully for change.
In late August, inablunt rejection of the United Nations Security Council and just days after two UN envoys traveled to Burma seeking democratic change and improvements in human rights, the country's military regime hauled dozens of the 88 Generation Students from prison cells into court in order to begin "sham" trials that will likely result in their long-term incarceration.
The most prominent of the 88 Generation Students, Min Ko Naing, has won numerous international awards for his peaceful, nonviolent calls for change in Burma including the Civil Courage Prize from the Northcote Parkinson Fund in the United States, the Homo Homini Award from People in Need Foundation in the Czech Republic, the John Humphrey Freedom Award from the International Centre for Human Rights and Democratic Development in Canada, and the Student Peace Prize, widely considered the "junior" Nobel Peace Prize, in Norway.
Burma's military regime is among the worlds most brutal. Besides locking up Aung San Suu Kyi and over 2,100 political prisoners, the regime has recruited more child soldiers than any other country in the world and destroyed 3,200 ethnic minority villages, forcing millions of villagers to flee their homes as refugees or internally displaced.
Today, the Thailand-Burma Border Consortium,acoalition of non-governmental organizations administering refugee camps and assisting displaced persons along the Thailand-Burma border, reported that over 1/2 million people have fled from their homes and are living as internal refugees in eastern Burma. At least one million persons have fled their homes as refugees -- both outside of Burma and inside the country's borders. Also today, the Australian government expanded its travel and financial sanctions on Burma's military regime, banning dozens of cronies of the military regime from traveling to and doing business with Australian firms.##
Posted by ကိုထိုက် at 10:52 13 comments
အရည်အချင်းမပြည့်မှီတဲ့ ဆရာဝန်တွေ မွေးထုတ်ရန် ကြိုးစားနေတဲ့ အာဏာရူးသန်းရွှေရဲ့မြေး
ဖိုးလပြည့်၏အလိုအရ စာရင်းကို ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံထုတ်ပြန်ရာ နေခြည်လင်းလဲ့နှင့် သူမ၏ သူငယ်ချင်းများ စာရင်းတွင် မပါလာတော့ဘဲ ထိုစာရင်းတွင် ကျန်နေခဲ့သော ကျောင်းသား။သူများက မကျေမနပ်ဖြစ်ခါ နေပြည် တော်သို့တိုင်တန်းကြပြန်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျောင်းသား။သူ အားလုံးကို စာမေးပွဲဖြေခွင့်ပြုလိုက်ရသည်။ ဒီကိစ္စ ဒီတွင် မရပ်ဘဲ အခြားအတန်းများအားလုံးတွင်လည်း ကျောင်းခေါ်ချိန် ပြည့်ြုပည့် မပြည့်ပြည့် ကျောင်းသား။သူများ၊ ကျေနပ်စေရန် စာမေးပွဲဖြေခွင့်ပြုလိုက်ရသည်။
သန်းရွှေ၏မြေး ဖိုးလပြည့် နေ့စဉ်လာရောက်ပိုးပန်းရာ ဆေး(၁)သို့ အ၀င်လမ်းဖြစ်သော သထုံလမ်းကို နိုင်လွန် ကတ္တရာ ချက်ချင်းခင်းပေးထားရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဇော်၏ သားဖြစ်သူကလည်း ဆရာများအား လက်ကိုင်ဖုန်း တယောက်တလုံး အလားကားပေးထားပြီး စာမေးပွဲနီးလျှင် မေးခွန်း ကြိုတင်ရယူလေ့ရှိကြောင်း ဆေးတက္ကသိုလ် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှကြားသိရပါသည်။ ဒီကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ပါမောက္ခဖြစ်သူ ဒေါက်တာဦးအေးမောင်ဟန်မှ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခါ ရာထူးမှ အနားယူခွင့် တောင်းခံထားပါသည်။
လူ့အသက်ကို ကယ်တင်ရမည့် ဆရာဝန်လောင်းများ အရည်အချင်း ပြည့်မီရေးသည် အရေးကြီးလှပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အရည်အချင်း မပြည့်မီသော ဆရာဝန်များကိုသာ မွေးထုတ် နေပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာ ရှေ့လျှောက် ရင်လေးဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း ဆေးတက္ကသိုလ်ဆရာ ဆရာမများမှ မှတ်ချက်ချ ပြောကြားနေကြပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 10:027comments
Another Bomb Explosion
Last night (18th Oct 2008) around 7pm, there wasabomb explosion in Bout Thaw Military Record Center, Yangon. There is no further reported information about deads or injuries.
Posted by ကိုထိုက် at 10:547comments
စင်္ကာပူမှာ ဆေးကုသခွင့် ငြင်းပယ်ခံလိုက်ရတဲ့၊ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ
မြန်မာစစ်ဆရာဝန်တွေကို၊ အယုံအကြည်မရှိဆိုတဲ့၊ အကြောင်းပြချက်နဲ့၊ အူကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးသန်းရွှေဟာ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ၊ ဆေးရုံတက်ကုသရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်၊ ဆေးရုံတက်စဉ်၊ သူနေထိုင်မဲ့အခန်းရှိ၊ အထပ်တခုလုံးအား၊ စင်္ကာပူမှလုံခြုံရေး တာဝန်ယူ ပေးရန်နှင့် စင်္ကာပူအစိုးရ၏ ဧည့်သည်တော်အဖြစ်၊ ဖိတ်ကြားပေးရန်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စင်္ကာပူအစိုးရထံ တင်ပြတောင်းခံခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။
ဒီလို တောင်းဆိုချက်တွေထဲက၊ စင်္ကာပူအစိုးရဘက်က၊ သည်းမခံနိုင်တဲ့ တောင်းဆိုချက်ကတော့၊ သူ့ရဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းမှုကို၊ ဆေးရုံမှ အာမခံရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။
ဒီလို မဖြစ်နိုင်တဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေကိုသည်း မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့၊ စင်္ကာပူတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှ၊ “ဒီလိုရောဂါမျိုးဟာ၊ စင်္ကာပူထက်၊ UK နိုင်ငံမှာကုသတာဟာ၊ ပိုမိုသင့်လျှော်ပြီး၊ အာမခံချက်ပိုရှိလို့၊ အဲဒီကိုဘဲသွားရန်အကြံပြုပါတယ်။” ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့၊ ငြင်းပယ်ခံရတာကြောင့် စင်္ကာပူခရီးစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရတာလို့ နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းများထွက်ပေါ်လျှက်ရှိပါတယ်။
(ထိုင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တနေရာရာမှာ ဆေးကုသခွင့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သံရုံးများမှတဆင့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ယူဆရပါတယ်။)
< style="text-align: center;">HOSPITAL ADMISSION WAS REFUSED FOR SR.GEN.THAN SHWE
It was arranged to get medical treatment in Singapore for Sr.Gen.Than Shwe intestine cancer as Burmese Military doctors were not trusted. So many demands for security arrangement were asked by Burmese Authority that responsible party in Singapore finally frustrated. Sr.Gen.Than Shwe tries to persuade Singapore Government to invite him for State visit through Ministry of Foreign Affair but turn down by Singapore Government.
One more shameful thing is that Sr.Gen.Than Shwe team ask for recovering guarantee from Singapore hospital and finally Singapore side advise them to get better and sure treatment in UK. It isarelief for Singapore hospital that they can finally sort out the problem by stupidity of patient own fault. Sr.Gen.Than Shwe medical treatment is presently postpone as they found nowhere to go. All was learnt from Sr.Gen.Than Shwe’s inner circle grapevine. (It was said among them in Nay-Pyi-Taw inner circle that Sr.Gen.Than Shwe is seeking for another suitable country to accept him and give himamedical treatment. Probably China, Thailand or any other if not accepted in Singapore.)
Posted by ကိုထိုက် at 10:47 8 comments
နိုင်ငံရေးကို အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ကြည့်ခြင်း
“နိုင်ငံရေး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားလိုက်တာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ နားထဲမှာ ကြောက်စရာ လန့်စရာ စကားလုံး တစ်ခုကို ကြားလိုက်သလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်ကြတာကို မြင်နေရတာ ကြာပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေထဲမှာ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို သေချာ သဘောပေါက်သူက သာမန်လူတန်းစားက အရမ်းရှားနေပါတယ်။
အမြဲလိုလို ကြားနေရတတ်တာကတော့ “နိုင်ငံရေး မလုပ်နဲ့ အန္တာရယ်များတယ်” တဲ့။ အဲဒီ စကားစုက မှန်သင့်သလောက် မှန်အောင် နအဖက ခြိမ်းခြောက်လုပ်ပြထားတော့ “နေသည် အရှေ့က ထွက်သည်။” ဆိုတဲ့ အမြဲမှန်တဲ့ စကားလုံးလောက် ဖြစ်အောင် လူအချို့ရင်ထဲမှာ ထင်နေကြပါပြီ။
“နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ကြည့်ပေါင်းနော်” တဲ့။ နောက်ထပ် ကြားနေရတဲ့ စကားလုံး။ နိုင်ငံရေး သမားဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တောင် သေချာ တွေးမနေတော့ဘူး။ ကြည့်ပေါင်းနော် ဆိုတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုက နောက်က ကပ်ပါလာနေပြန်ပါတယ်။
“နိုင်ငံရေး = ကြောက်စရာ ကောင်းသော အလုပ်၊ နိုင်ငံရေးသမားများ = ကြောက်စရာကောင်းသော သူများ”လို့ အဓိပ္ပါယ် အလိုလို ထွက်လာနေပါတယ်။ အဲဒီ အချက်တွေက နေ့စဉ် ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားနေရသော အသံများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဗျာ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာလေး ပြန်ကြည့်ကြရအောင်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဒီလို ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
"နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့ စဉ်နှင့်အမျှ လူ့ လောကတွင် တွေ့ကြုံနေကြရသော ကိစ္စပင်ဖြစ်ပေသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ လူ့ ကိစ္စဟု ဆိုရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စားမှု၊ သောက်မှု၊နေမှု၊ ထိုင်မှု၊ သွားမှု၊ လာမှု အစုစုသည် နိုင်ငံရေးပင်ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံရေးကို မဆင်ခြင် မတွေးတောမိစေကာမူ နိုင်ငံရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမြဲတစေ ဆက်သွယ်နေ၏"
အင်္ဂလိပ်လို politic ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို နိုင်ငံရေးလို့ ဘာသာ ပြန်လိုက်တာလား၊ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အင်္ဂလိပ်စကား politic နဲ့ ထပ်တူပြုလိုက်တာလားဆိုတာတော့ ကျွန်တော် သေချာ မသိပေမယ့် Politic ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးက မြန်မာစကားလုံး နိုင်ငံရေး ဆိုတာထက် ပိုကျယ်ပြန့်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မြန်မာစကားလုံးမှာတော့ နိုင်ငံအရေးလို့ ဆိုလိုချင်ပုံရပါတယ်။
(နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ လူတစ်စုက ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ရလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီ အသုံးအနှုံးက ယျေဘုံယ အားဖြင့် လူထု အစိုးရမှာ သုံးလေ့သုံးထ ရှိတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုကြီးများ၊ ပညာတတ် လူတန်းစားများ၊ ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့များ စတဲ့ လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း သုံးကြပါတယ်။)
အဲဒါကတော့ wikipedia မှာ တွေ့တဲ့ politic ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတွေမှာတော့ သံဃာတွေ နိုင်ငံရေး မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးတောင် တိုးတိုးတမျိုး၊ ကျယ်ကျယ်တဖုံ ကြားနေရချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်လို politic မှာတော့ ဘာသာရေးမှာပါ Politic ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးတယ်လို့ အတိအကျ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စကားလုံးတွေ၊ ဟိုလူပြောဒီလူပြော စကားတွေကို ကိုးကားပြီး ပြောနေပြန်ပြီလို့ ယူဆလည်း ခံရမှာပါပဲ။
ဒါဆို ကျွန်တော် ခံစားမိတာနဲ့ ကျွန်တော် သိတဲ့ နိုင်ငံရေး ဆိုတာကို ပြောရမယ် ဆိုရင်၊ “နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွင်း တိုးတတ်သော လူဘောင် အဖွဲ့ အစည်းအဖြစ်ကို တည်ထောင်ရန် ပြုမူ လုပ်ဆောင်ရသော လုပ်ငန်းစဉ်” လို့ ကျွန်တော်က အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခြင်ပါတယ်။
ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်ကလည်း တိုးတတ်တဲ့ လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကို တည်ထောင်ဖို့ တာဝန်ရှိသလို၊ ပါတီခေါင်းဆောင်မှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ သာမန် ပြည်သူလူထု တစ်ဦးခြင်းဆီမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။
ကဲ .. အခု မင်းတို့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကရော ဘာတွေလဲ၊ နိုင်ငံရေး မဟုတ်ဘူးလားလို့ မေးလာစရာ ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ .. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ လူဘောင် အဖွဲ့ အစည်းမှာ နိုင်ငံရေးသမားလို့ ခေါ်လို့ရတဲ့ လူ အတော့်ကို နည်းပါတယ်။ (ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း နိုင်ငံရေး သမားအဆင့် မဟုတ်ပါ။ ။စကားချပ်)
များသောအားဖြင့် တော်လှန်ရေးသမား (သို့) အာဏာရှင် စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သူအဆင့်ပါ။ ဘာလို့ ဒီလို ပြောလို့ရသလဲ ဆိုတော့ မြန်မာ့အရေး ကိစ္စမှာ နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး လုပ်လို့ မရသေးတဲ့ အချိန် ဖြစ်နေလို့ပါ။ အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ လုက်ငန်း လုပ်တာကို နိုင်ငံရေးလို့ သတ်မှတ်ရင်တော့ နအဖ(စစ်တပ်) က နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာပါ။ ဒါဆို လူတွေပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားနဲ့ ပြောရရင် “နိုင်ငံရေး လုပ်စားနေတယ်” ဆိုတာ စစ်တပ်က စစ်ဗိုလ်တွေကို တိုက်ရိုက် ရည်ညွန်းတယ်လို့ ကျွန်တော်က သတ်မှတ်ပါတယ်။ သူတို့ကသာ နိုင်ငံရေးကို လုပ်စားနေသော ရွံစရာ လူတန်းစား တရပ် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ လူတွေကတော့ တိုင်းပြည်အကြောင်း ပြောကြ၊ ဆွေးနွေးကြ၊ ဒီထက်ပိုလာရင် ဆန္ဒပြကြ၊ တောင်းဆိုကြ အဲဒီလောက်ပါပဲ။ ဒီထက် ထပ်ပိုလာရင်တော့ နအဖ(အာဏာရှင်စနစ်) ဆန့်ကျင်ရေး အလုပ်တွေကို တစိုက်တမက်မက် လုပ်ကြတာပါပဲ။
ယခုလက်ရှိ မြန်မာ့ အသိုးအဝိုင်းမှာ တချို့သော လူတန်းစားတွေက အဲဒီအလုပ်တွေ လုပ်တဲ့ လူတွေနဲ့ မပေါင်းနဲ့ (နိုင်ငံရေး သမားတွေနဲ့ မပေါင်းနဲ့၊ နိုင်ငံရေး မလုပ်နဲ့၊ နိုင်ငံရေး မပါဘူး) လို့ ပြောနေတာဟာ .. အနှစ်သာရပိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်နေသော သူများကို မပေါင်းနဲ့၊ တိုးတတ်သော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်သူများကို မပေါင်းနဲ့၊ အာဏာရှင် စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး မပါဘူး၊ လူ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတတ်အောင် မလုပ်ဘူး လို့ ခါးခါးသီးသီး ငြင်းဆန်နေသော လူများလို့သာ မြင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် .. အာဏာရှင် စနစ်ကို လက်ခံသူ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးမပြုသူများလို့တောင် ခေါ်ဆိုရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ကဲ ကျွန်တော်တို့ တိုးတတ်အောင်မြင်သော မြန်မာ့ လူ့ အဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်ဖို့ ....... အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ကြမလား သို့မဟုတ် ယခု သုံးနေသောစကား နိုင်ငံရေးလုပ်မလား၊ ...... ကျဉ်းမြောင်းသော နိုင်ငံရေး လုပ်စားသူ နအဖ စစ်ဗိုလ် တချို့ကိုထောက်ခံမလား သို့မဟုတ် ယခု သုံးနေသောစကား .. ငါတို့က နိုင်ငံရေး မလုပ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေး မပါဘူး .. လို့ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်မလားဆိုတာကတော့ သေချာ စဉ်းစားရယ့် အချက်တွေ ဖြစ်ပါကြောင်း .. ခင်ဗျာ။
Posted by ကိုထိုက် at 09:24 8 comments
(ကျွန်တော် အခြား ကိစ္စများဖြင့် မအားလပ်သောကြောင့် လွန်ခဲ့သော တပတ်လုံးလုံး ပို့စ်အသစ် မတင်နိုင်ခြင်းအတွက် ဒီဘလော့ကို လာကြည့်ပြီး စာလာဖတ်သောသူများအား အလွန်အားနာမိပါသည်။ ထို ပို့စ် အသစ် မတင်နိုင်ခြင်းအတွက် လာရောက် ဖတ်ရူသူများအား အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။)
Posted by ကိုထိုက် at 11:297comments
( www.drlunswe.blogspot.com မှ ရယူထားပါသည်။)
ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတဦးနဲ့ ညစာစားကြရင်း သူပြောလိုက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို နားထောင်လိုက်တော့ ရင်ထဲမှာ ပျို့တက်လာပြီး အန်ချင်သလိုလို ဖြစ်လာမိပါတယ်။ သူကတော့ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ဘာမှရေးကြီးခွင်ကျယ် မဟုတ်သလို ရုပ်ရှင်ကားတကားအကြောင်း ပြောသလို ပုံမှန်ပြောနေကျပုံစံနဲ့ ပြောပြတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဖြစ် က ရုပ်ရှင်ကားမဟုတ်သလို ရုပ်ရှင်ကားတကား ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် အတော်အော်ဂလီဆန်ချင်စရာ ပြကွက်တ ကွက်မျိုး ဖြစ်နေတဲ့အတွက် စာလုံးတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင် ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာမိပါတယ်။
ဒီနေ့ ၂၈ စက်တင်ဘာ၂၀၀၈ မှာ ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေက အယ်လ်အေမြို့က ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာကျောင်းတ ကျောင်းကို နံနက်ပိုင်းသွားပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ မွေးနေ့ပွဲအလှူရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဗုဒ္ဓ ဘာသာမြန်မာကျောင်းက မကြာသေးခင်ကမှ နေရာပြောင်းသွားလို့ လမ်းမှာ လမ်းမှားတဲ့အတွက် မနက် တုန်းက ကားပေါ်ကနေ ကျွန်မဆီ ဖုံးဆက်မေးလို့ အွန်လိုင်းကနေတောင် ကျွန်မလိပ်စာသစ် ရှာပေးလိုက်ရ ပါသေးတယ်။ ပွဲမှာ လူအတော်စည်ပါတယ်တဲ့။ စားကြသောက်ကြ တီးကြဆိုကြရင်း စင်ပေါ်က ရုတ်တရက် ကြေညာလိုက်တဲ့ စကားတခွန်းကြောင့် သူလည်း ရုတ်တရက်တော့ အလွန်ကြောင်အန်းအန်း ဖြစ်သွားတယ် တဲ့။
အဲဒီစကားက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ဗုဒဘာသာမြန်မာကျောင်းက မွေးနေ့ပွဲက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှား မှုတွေ မပါပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ မပတ်သက်ပါဘူး ဆိုတာပါပဲ။ မိုက်ခွက်ကို ကိုင်ခဲပြောတဲ့ လူကြီးမင်းက မွေးနေ့ရှင်ရဲ့ အမျိုးသား ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ လူတွေကလည်း ပြာပြာသလဲ ခွေးကြည့်ကြောင်ကြည့် တယောက်နဲ့တယောက် ကြည့်ကြ၊ တောင်တောင်မြောက်မြောက် အရပ်ရှစ်မျက်နှာလည်းနှံ့ရော သူ့ဆီမှာ အဲဒီမျက်လုံးတွေအားလုံး လာပေါင်းဆုံကြပါတယ်တဲ့။ သူဝတ်ထားတာက အနီရောင်တောက်တောက်ပေါ်မှာ အ၀ါရောင်စာလုံးကြီးကြီးနဲ့ Free Burma ဆိုတဲ့ စာရေးထားတဲ့ အင်္ကျီ၊ သူဆောင်းထားတာက အကျီနဲ့ဆင်တူ Free Burma ဦးထုပ်။ (အယ်လ်အေမှာ ခုချိန်နေ့ခင်းပိုင်းဆို နေခြစ်ခြစ်တောက် ပူပါတယ်)။
ကျွန်မက မေးကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီလို မိန်းမမွေးနေ့မှာ နိုင်ငံရေးမပါပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ လူကြီးမင်းက အသက် ဘယ်လောက်များ ရှိပြီလဲဆိုတော့ တတိယအရွယ်နီးပါး ရှိနေပြီတဲ့။ ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေကို ဘာပြန်ပြော လိုက်သလဲ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်လိုက်သလဲ မေးကြည့်တဲ့အခါ သူက အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ‘ ဘာမှမပြောပါဘူး ဗျာ။ သူတို့ကြောက်တဲ့ အကျီ ကျွန်တော်က ၀တ်သွားမိတာကိုး။ ကျွန်တော်လည်း သူတို့အဲလောက် ကြောက်လိမ့်မယ် မထင်လို့ပါ။ နောက်ဆို ကျွန်တော် ၀တ်တာစားတာ ဆင်ခြင်ရမယ်။ အံ့သြတာတခုတော့ ရှိတယ်။ ကျွန်တော် သူတို့ပွဲကို ဘာအနှောက်အယှက်မှမပေးဘဲ ဘာလို့ အဲဒီလိုစင်ပေါ်တက် ကြေညာတဲ့အထိ အသည်းအသန် ဖြစ်သွားသလဲဆိုတာ’တဲ့။ သူက သူ့ရဲ့ ပြောနေကျဟန်ပန်အတိုင်း ပြုံုးပြီး အေးအေးဆေးဆေး ပြောပါတယ်။ (မဲ့ပြုံးမဟုတ်သလို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အပြုံးမျိုးလည်း မဟုတ်ပါ။ သူစကားပြောရင် ပြုံးနေကျ ပုံမှန်အပြုံးမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်)
‘အဲဒါနဲ့ အကိုပြန်လာရောလား’ ကျွန်မက မေးတော့ ‘ကျွန်တော်လည်း ထပြန်ရကောင်းမလား စဉ်းစားသေး တယ်။ လူတွေကလည်း ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်ကြတယ်လေ။ ဒါပေမယ့်လေ သူများကို ကျွန်တော်တို့က နှောက်ယှက် ဖို့လာတာ မဟုတ်သလို စီးပွားလာရှာတာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ လူမှုရေးကိစ္စတွေ လုပ်နေကျအတိုင်း လုပ် နေတာ။ ဒါနဲ့ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပြီးမှ ပြန်လာပါတယ်’ တဲ့။
ကျွန်မ တွေးကြည့်မိတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ သုံးနေကျ ‘ပြီးတော့လည်း ပြီးတာပါပဲကွာ’ ‘နေပါစေတော့’ စတဲ့ စကားလုံးများ …။ နောက်ပြီး ဉာဏ်မီသလောက် စဉ်းစားမိတာတွေပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ အမေရိ ကားရောက် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအမေရိကန်တွေအကြောင်း …။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုတာ (သူတပါးကို မထိခိုက်ရင်) လွတ်လပ်စွာပြောဆို၊ လွတ်လပ်စွာရေးသားနိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတဲ့။ မြန်မာအချို့ အမေရိကားကို ရွှေ့ပြောင်းလာတာ တတိယအရွယ်ရောက်တဲ့အထိ နှစ် တွေလည်း မနည်းကြာမြင့်လာကြပြီိ။ ဒီပုံအတိုင်းဆို (သူတပါးကို မထိခိုက်လျှင်) ဦးထုတ်အကျီ လွတ်လပ်စွာ ၀တ်ဆင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာကို ဒီနေ့ထိ လက်မခံနိုင်ကြသေးတဲ့ မြန်မာအမေရိကန်တွေ ရှိသေးတယ်လို့ ယူဆ လိုက်ရမှာပေါ့နော်။ နောက်တခုက ‘နိုင်ငံရေး’ ‘နိုင်ငံရေးသမား’ ဆိုတာကို ‘ရာဇ၀တ်မှု’ ‘ရာဇ၀တ်ကောင်’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ သိပ်မသဲကွဲကြသေးတာလား။ မသဲကွဲချင်ယောင် ဆောင်နေကြတာလား။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေပုံအကြောင်း နေ့စဉ်အာရုံထားတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလို ကမ္ဘာ့ထိပ် သီးနိုင်ငံမှာ အရိုးဆွေးနေအောင် အသက်ဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြ လက်ရှိနေထိုင်နေကြပြီး ‘နိုင်ငံရေး’ဆိုတဲ့ စကား လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ဘယ်လိုများ နားလည်လက်ခံခဲ့ကြသလဲ။ ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ ဘယ်လိုများ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသလဲ ကျွန်မအလွန်သိချင်ပါတယ်။ Free Burma ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ အနီရောင်ကိုမြင်တာနဲ့ ပျာပျာ သလဲ ခါးခါးသီးသီးကို ယောက်ယက်ခတ်သွားရတဲ့အကြောင်းက ဘယ်လိုအာမေဋိတ်မျိုး ရွတ်ဆိုရမှန်း မသိရ လောက်အောင် ကျွန်မ တော်တော်အံ့သြရပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ‘နိုင်ငံရေး’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုသိသိ မသိသိ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို တစိုက် မတ်မတ် ယုံကြည်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - အတိုက်အခံဘက်ကို ထောက်ခံသူတွေရှိသလို စစ်အစိုးရကို နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက် ယုံကြည်သူတွေ လက်ခံသူတွေလည်း ရှိမှာပါပဲ။ လူတဦးချင်းစီရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ဆိုင်တာမို့ ဒါဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်စွက်ဖက်စရာ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာကိုယ်ပိုင်ခံယူချက် တခုတလေမှမရှိဘဲ ‘မြန်မာပြည် မပြန်ရဘဲနေမယ်။ ကြောက်စရာကြီး’ ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေ ပြောတတ်ကြတဲ့ လူတွေထဲမှာ အမေ ရိကားမှာ နှစ်ချို့အရိုးဆွေးအောင်နေ စီးပွားရေးအရလည်း အဆင်ပြေ၊ နိုင်ငံသားတွေလည်း ဖြစ်ပြီးသား၊ ဘ၀ ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ အောင်အောင်မြင်မြင် အခြေချပြီးသား တတိယအရွယ် ဇရာထောင်း မြန်မာအမေရိကန်များ တွေ ပါနေတာတော့ တော်တော်ခံစားလို့မရတဲ့ ကိစ္စပါ။
သူတို့ဟာ ကျွန်မတို့ အရွယ်တွေကို မျိုးဆက်နှစ်ဆက်စာလောက် နှစ်ပြန်မွေးလို့ရပြီး ကျွန်မတို့ထက် ဘ၀အ တွေ့အကြုံရော ဥာဏ်ပညာအရည်အချင်းရော နိုင်ငံတကာနဲ့ဆိုင်တဲ့ အသ်ိပညာတွေပါ သာလွန်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မက ယုံကြည်ပါတယ်။ (လူတယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်မှုနဲ့ အထိုက်အလျောက် ဆိုင်တယ်လို့ ကြားဖူးလို့ပါ။) သူတို့တွေဟာ ကျွန်မတို့ ပြည်ပရောက် မြန်မာ လူငယ်တွေကို ကောင်းကောင်းကြီးကို ဦးဆောင်သင်ပြနိုင်မယ်လို့လည်း လေးလေးစားစား ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်တိုင်လူပုံအလည်မှာ စင်ပေါ်တက်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတခွန်းဟာ ဘာကိုရည်ရွယ်တယ်၊ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်၊ တဘက်သားကို ဘယ်လိုအကျိုးဆက် သက် ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို အဲဒီလိုအသက်အပိုင်းအခြားနဲ့ (ရွှေ့ပြောင်းအဆင့်ကျော်လွန်ပြီး) မြန်မာအမေ ရိကန် လူကြီးမင်းများဟာ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် နားလည်ပြီးသား ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား ကိစ္စ မျိုးပါ။
ကျွန်မ တခုမေးချင်ပါတယ်။ ‘နိုင်ငံရေး’ ‘နိုင်ငံရေးသမား’ ဆိုတဲ့ စကားတွေကြားရင် နှာစေးချင်သလို ရင်ကျပ် ချင်သလိုလို ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ‘နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ မပတ်သက်ဘူး’ ဆိုတဲ့ စကားကို ဖက်ရှင်တခုလို ကွမ်းငုံသလို ငုံငုံထားပြီး လူများပြီဆို ပြစ်ကနဲ ထွေးထွေးထုတ်ပြတတ်တဲ့ လူကြီးမင်းများကိုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာနဲ့တွဲပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းကို ကြားဖူးကြသလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာကို ကြားဘူးပါသလား။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ နဲ့တွဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာကို ကြားဘူးပါသလား။
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာ အတွင်းဝန်ရုံးမှာ စီးပွားရှာရင်း ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် အစည်းအဝေးထိုင်ရင်း သူတပါး လုပ်ကြံခံသွားရတယ်ဆိုတာလောက်ကို ရော နားစွန်နားဖျားလောက် ကြားဘူးပါသလားလို့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က နှစ်၂၀ ကြာ ထောင်ထဲကလွတ်လာ တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက ဆုတွေဝိုင်းပေးကြတဲ့ အသက် ၈၀ အရွယ် ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ ဒီနေ့ထိနိုင်ငံရေးသမားပါတဲ့။ မြန်မာအမေရိကန်များ အလွန်ပတ်သက်ချင်ကြတဲ့ မြို့တော်ဝန်၊ ကောင်စီလူကြီး ကစလို့ အထက်လွှတ်တော် အောက်လွှတ်တော် အမတ်မင်းများဟာလည်း ‘နိုင်ငံရေး’နဲ့ အကျွမ်းတ၀င်မရှိတဲ့ သူ တဦးမှမရှိကြပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ တီရှပ်များကို အလွန်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ၀တ်လေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းရဲ့ အသက် ၇ နှစ်အရွယ် တူကလေး ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ကျွန်မ တော်တော် စိတ်ထိခိုက်သွားရပါတယ်။ ‘သား နောက်ဆိုရင် ဘွားဘွားစုနဲ့ ဒေါင်းပုံပါတဲ့ တီရှပ်တွေဝတ်တော့ဘူးတဲ့’ ‘ဘာဖြစ်လို့လဲ သားရဲ့’လို့ မေးတော့ ‘ဟာ အန်တီကလဲ။ ဟိုဦးဦးလို လူတွေဝိုင်းကြည့်ခံရရင် ရှက်စရာကြီး’တဲ့။ ကျွန်မ ရုတ်တရက် ဆွံ့အသွားရပါတယ်။ ကလေးလေးက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ မွေးထားတဲ့ ပထမမျိုးဆက် မြန်မာအမေရိကန်ကလေး ...။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးခဲ့တဲ့ Freedom from Fear စာအုပ်နဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ပြည့်လျှံကျပြီး ပြည်ပက ဒီမြေပေါ်မှာ စတင်ပျံ့ကျဲစပြုလာတဲ့ အကြောက်တရားမျိုးစေ့တွေ …။
ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တချို့ကလည်း ဒီလိုသုံးသပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာကျောင်းမှာ လုပ်တဲ့ အလှူဆိုတော့ ကျောင်းရဲ့မူဝါဒနဲ့ မကိုက်ညီလို့ နေမှာပေါ့တဲ့။ ကျွန်မကတော့ အဲဒီဗုဒ္ဒဘာသာ မြန် မာကျောင်းက သာသနာ့အနွယ်ဝင် သူတော်စင်များကို မသိဘူး မမြင်ဘူးတာမို့ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ ဗုဒ္ဓက ‘ငါ့သာသနာမြေမှာ နိုင်ငံရေးမလုပ်ရ။ ငရဲအိုး ဇောက်ထိုးကျမယ်’လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မဟောထားတဲ့အတွက် ကမ္ဘာမှာ သာသနာပြုနေတဲ့ အမေရိကားရောက် ဗုဒ္ဒဘာသာ(မြန်မာ) သာသနာ့အနွယ်ဝင် သူတော်စင်တွေမှာ အဲဒီလိုအတွေးမျိုး ရှိလိမ့်မယ်လည်း မမျှော်လင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျွန်မမိတ်ဆွေက သာသနာ့မြေမှာ အရက် သောက်ပြီး အော်ဟစ်ဆဲရေးနေတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။
ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း အခြေခံသိကြတဲ့ ငါးပါးသီလမှာ မုသာဝါဒကံဆိုတာ အမှန်တရားကိုဖျောက်ပြီး လိမ်လည် ပြောဆိုခြင်းပါတဲ့။ သူတပါးအကျိုးအပြစ်ကို မရည်ရွယ်ဘဲ အမှန်ကို အမှန်ပြောပြီး အမှားကို အမှားပြောဆိုတာ လည်း မုသာဝါဒကံ စောင့်ထိန်းရာ ရောက်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ရင်တော့ မုသာဝါဒကံ ထိုက်ပါတယ်တဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၀၇ က ခုလိုစက်တင်ဘာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ ဖိနပ်မပါဘဲ လမ်းလျှောက်ပြီး မေတ္တာသုတ် ရွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဘာလက်နက်တခုမှမပါ လက်အုပ်ချီပြီး ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း မေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာရဟန်းသံဃာတော်တွေကို ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခံယူထားတဲ့ မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်တွေက မျက်ရည်ယိုဗုံးခွဲ၊ ဦးခေါင်းပြောင် ပြောင်ကို တုတ်နဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်၊ ခြေထောက်နဲ့ ကန်၊ သေနတ်နဲ့ ရက်ရက်စက်စက် အနီးကပ်ကို ပစ် ပြီး ဖြိုခွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။
ချက်ချင်း ပျံလွန်တော်မမူတဲ့ သံဃာတော်တွေကိုလည်း ထောင်ထဲမှာ လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်၊ အတင်းအဓမ္မ သင်္ကန်းဆွဲချွတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအော်ဂလီဆန်စရာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စဟာ အခြားဘာသာဝင်တွေပါ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားရပြီး တကမ္ဘာလုံးလည်း ပျက်ပျက်ထင်ထင် သိပြီးသားကိစ္စပါ။ အဲဒီကိစ္စအတွက် ပီနန် ဆရာတော်ကြီး ဦးပညာဝံသ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီး ‘သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သံဃာအဖွဲ့အ စည်းကြီး’ ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဟောဒီအယ်လ်အေမြေမှာပဲ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
သာသနာ့ဥသျှောင် အဖွဲ့အစည်းကြီးဟာ ဒီနေ့ထိ မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ လက်တွဲပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အရေး ကိစ္စမှန်သမ မငြိုမငြင် တာဝန်ထမ်းနေပါတယ်။ (မြန်မာဗုဒဘာသာမှာ ဘိက္ခူနီ အမျိုးသမီးရဟန်းတော် များသာ ရှိခဲ့ရင် ဘိက္ခူနီ မြန်မာအမျိုးသမီး ရဟန်းတော်များအဖွဲ့ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ဦးမှာပါ) အဲဒီသာ သနာ့ဥသျှောင် အဖွဲ့အစည်းကြီးကပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်း တွေ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရ အဖြိုခွဲခံခဲ့ရတဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ကို သင်္ကန်းရောင်တော်လှန်ရေး နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မနှစ်က ဒီအချိန်ဆို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ မြန်မာပြည်က အနှိပ်စက်ခံရတဲ့ သံဃာတော်တွေအတွက် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အနီရောင်တီရှပ်တွေ တပတ်လောက် ၀တ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၀မ်းပန်းတနည်းနဲ့ ဆုတောင်း ပွဲတွေ မီးထွန်းပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ ဘာသာကြီး ၄ ရပ်က ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း အဖိနှိပ်ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်တွေအတွက် မိမိတို့ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအလိုက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေကလည်း သင်္ကန်းရောင်တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အနီရောင် Free Burma တီရှပ်ကို သတိတရနဲ့ တပတ်လောက် ၀တ်ပစ်လိုက်မယ် စိတ်ကူးထားဟန်တူပါတယ်။ အဲဒီသာ သာနာ့မြေ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာကျောင်းကို ကျွန်မမိတ်ဆွေ Free Burma တီရှပ်ဝတ်သွားတဲ့နေ့က ၂၈ စက်တင် ဘာ၂၀၀၈ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓသာ ဒီနေ့ထိ သက်တော်ထင်ရှားရှိဦးမယ်ဆိုရင် ဒီအဖြစ်အပျက်ကို အကြောင်းပြုပြီး ဘယ်လိုတရားတော် တွေ ဟောကြားတော်မူမလဲ ကျွန်မ အလွန်သိချင်ပါတယ်။
၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈
နံနက် ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်
(ကဲဗျာ ကျွန်တော်တို့ အခု ခေတ္တ ကွန်းခို ရောက်ရှိနေရတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရော .. ဘယ်လိုများပါလဲဗျာ။)
Posted by ကိုထိုက် at 01:079comments
မြန်မာနိုင်ငံမှ (မ)တရားသူကြီးများအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ် အထူး အာဏာရ (မ)တရားသူကြီး ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဝင်း၊
(သင်္ကန်းကျွန်းမှ ကိုမြသန်းထိုက်အား နအဖ အလိုကျ ဥပဒေမဲ့ မတရား အမိန့်ချသူ)
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (မ)တရားသူကြီး ဒေါ်မြမြဆွေ
ကိုသားကြီး ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား၏ အမှုတွင် နအဖ အလိုကျ ဥပဒေမဲ့ မတရား အမိန့်ချသူ
(ထိုအမှု တရားလို သက်သေ ရဲအုပ် ဟန်စိန်)
အင်းစိန် ထောင်တွင်း (မ)တရားသူကြီး ဦးစိန်လှ
(ကုန်ဈေးနှုံး ကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြသူ ကိုစိုးမြင့်ထိန်၏ အမှုတွင် နအဖ အလိုကျ ဥပဒေမဲ့ မတရား အမိန့်ချသူ)
Posted by ကိုထိုက် at 23:22 12 comments
မင်းကိုနိုင်နှင့် သူ၏ စိတ်ဓါတ် (သို့) နအဖ မတရားလုပ်မှုကို ငုံ့မခံဘဲ တွန်းလှန်ခြင်း
မတရားတာကို ငုံမခံ သော စိတ်ဓါတ်နှင့် နအဖ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုကို မီးမောင်းထိုးပြခြင်း
“မိသားစုတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် အနိမ့်ဆုံးအနေနဲ့ ပုံမှန် ပြန်လုပ်ပေးပါ။ ဒီလိုမှ လုပ်မပေးဘူးဆိုရင် ရှေ့ရုံးချိန်းတွေမှာ ပြန်လည်ပြီးတော့ ဒီ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ညီမျှတဲ့ တုံပြန်မှုတွေ ပြန်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။”
လူကို ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချလို့ ရပေမယ့် စိတ်ဓါတ်ကို အကျဉ်းချလို့ မရကြောင်း သက်သေပြမှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့(06 Oct 2008) တရားရုံးထုတ်ရာတွင် ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောခဲ့သော စကားများ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 23:007comments
ကျွန်တော်တို့မှာ ကိုယ်ပိုင် ကောင်းကင် တစ်ခုစီ ရှိကြပါတယ်။ လွတ်လပ်မှု၊ ကျယ်ပြန့်မှု တို့ကို ပေးစွမ်းတဲ့ ကောင်းကင်ပါ။ ကိုယ်ပိုင် ကောင်းကင်လို့ ဆိုပေမယ့် လူတိုင်းကလည်း ဘုံ ပိုင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သောသူတွေရဲ့ ကောင်းကင်တွေကတော့ ......
လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ အတူ ရှင်းသန့်တဲ့ လေထုကို ထိတွေ့ထိုးဖောက် နိုင်ဖို့ ကောင်းကင် တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ဘာသာ တည်ဆောက်နိုင်ရပါမယ့်။
ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ဥခွံအတွင်းကနေ တရှိန်ထိုးပျံတက်ပြီး၊
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်နေသောကမ္ဘာကြီးကို အပေါ်စီးက ဖတ်ရှူနိုင်ဘို့၊
ကျွန်တော်တို့ အတောင်ပံခတ်သံများဖြင့် ပန်းများကိုပွင့်စေဘို့၊
“ကောင်းကင် (နိုင်ငံပြု အနုပညာ မဂ္ဂဇင်း)”
ဘုရားသခင်ကစလို့၊ နေရောင်ခြည်၊ မိုးစက်၊ နှင်းပွင့်နဲ့ လရောင်တို့
ယူကေနိုင်ငံရောက် စာပေအနုပညာသည် အင်အားတစ်စုရဲ့ အားထုတ်မှု။
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝေငှ ဖတ်ရှူခံစားကြဘို့
စာမူများကို kaungkin.admin@gmail.com ကို ရေးသား ပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။
သင်နဲ့တကွ သင်နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးကို ကောင်းကင်ကစီးကြည့်ကြရအောင်
Posted by ကိုထိုက် at 00:019comments
SINGAPORE AMBASSADOR DONATES THE MONEY
၂၄.၉.၂၀၀၈ ရက်နေ့ထုတ်၊ မြန်မာသတင်းစာတွေထဲမှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စကာင်္ပူသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Robert Chua Hian Kong နှင့် မြန်မာစကာင်္ပူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဥက္ကဌ Mr. Teddy Choo တို့က၊ လှူဒန်းမှုတခုပြုလုပ်ရာမှာ၊ လက်ခံခဲ့တဲ့သူမှာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုနဲ့၊ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင်တယောက်၊ ဖြစ်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကို မြန်မာစကာင်္ပူအဖွဲ့အစည်း (SAM) က၊ ကျပ်ငွေ (၄.၅) သန်း လှူဒန်းခဲ့ရာ လက်ခံရယူခဲ့တဲ့၊ ဒုတိယဥက္ကဌ - ဒေါက်တာ တင်လင်းမြင့်ဟာ ရာထူးမှဖြုတ်ချ ခံရတယ်လို့ ယူဆရပေမဲ့ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်တဲ့၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်ပြီး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးဆွဲရောင်းဝယ်မှုကြောင့်၊ နာမည်ဆိုးနဲ့၊ ကျော်ကြားခဲ့သူ၊ အောင်ဇော်ရဲမြင့်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်ပါ တယ်။
မကြာသေးခင်ကာလက၊ အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဆေးပြားထုတ်လုပ်တဲ့စက်၊ ဓါတုဆေး၊ ပစ္စည်းတွေအပါအ၀င်၊ သက်သေအထောက်အထား အတိအကျနဲ့၊ ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့ ယခုအချိန်ထိ ဘာမှထိရောက်တဲ့၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့အတူတူ စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တဲ့၊ လူငယ်လုပ်ငန်းရှင် (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့အတွင်းလူ)၊ မောင်ဝိတ်ဟာ အဲဒီအမှုမှာ၊ နံပါတ် (၁) တရားခံအဖြစ်၊ တရားစွဲဆိုခြင်း၊ ခံနေရပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုတဲ့၊ စစ်အာဏာရှင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ မြေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတဲ့ကိစ္စမှာ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးနဲ့၊ ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီတို့က၊ အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို၊ လွှတ်နိုင်ရေးအတွက်၊ မောင်ဝိတ်ကို အသုံးချလိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ စီးပွားရေးလောကမှ၊ အကြောင်းသိ၊ အတွင်းလူတွေရဲ့၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဝေဖန်သံတွေအရ၊ ကြားသိရတာပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် အတိဒုက္ခရောက်ရရှာတဲ့၊ မိသားစုတွေဟာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ တွေ့ရှိနေကြရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိခင်နှင့်ကလေးတွေဟာ အထိခိုက်ဆုံးပါ။ ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းဆိုတဲ့၊ အရည်အချင်းမရှိတဲ့အသင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့၊ ဘာမှပြောပလောက်အောင်မရှိပါဘူး။
လှူဒါန်းသမျှငွေတွေဟာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကတော်များရဲ့ ဧည့်ခံစားရိတ်နဲ့တောင် မလောက်ငှပါဘူး။ သူတို့မည်မည်ရရ လုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့၊ သတင်းစာတွေထဲမှာ သူတို့ဓါတ်ပုံနဲ့ သတင်းပါဘို့ပါဘဲ။ ပြည်သူအများ ယုံကြည်တာကတော့၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ဟာ စစ်အစိုးရဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခို ရောင်းဝယ်မှုတွေမှာ၊ ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်၊ စစ်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ လက်လွှတ်လို့မရ ဖြစ်နေရတာပါ။
နိုင်ငံတကာကို လှည့်စားတဲ့အနေနဲ့၊ သူ့ကိုရာထူးကဖယ်ရှားထားသလို ပုံဖေါ်ထားပေမဲ့၊ လက်တွေ့မှာတော့၊ စစ်အကြံပေးကောင်စီမှာ အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့၊ (ဘိန်းကုန်ကူးမှုလုပ်ငန်း) တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲပါ။ ဒါကြောင့်သူ့ဇနီးဖြစ်တဲ့၊ ဒေါက်တာတင်လင်းမြင့်ဟာ ယခုအချိန်ထိ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားမခံရသေးတာပါ။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ဥပဒေအထက်မှာ၊ ယခုအချိန်ထိ ဆက်လက်ရှိနေသေးတဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နှင့်မိသားစုအကြောင်းကို ရန်ကုန်ရှိ စကာင်္ပူသံရုံးက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထက် ပိုသိလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အလားတူ စစ်အစီုးရရဲ့ မူးယစ်ဆေးကုန်ကူးမှုကြီးမှာ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သူဆိုတာ စကာင်္ပူသံရုံးက သိရှိလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါး ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ရှေ့တန်းက ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စကာင်္ပူနိုင်ငံမှ သံအမတ်ကြီးတဦးဟာ စကာင်္ပူနိုင်ငံကိုယ်စား မြန်မာမူးယစ်ရာဇာမိသားစုဝင်တဦးထံ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပေးလှူနေတာကို မြင်ကြရတဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမြင်မှာတော့၊ စကာင်္ပူနိုင်ငံရဲ့ဒီလုပ်ရပ်ဟာ၊ အပြောနဲ့ လုပ်ရပ်တခြားစီဖြစ်နေတဲ့၊ စကာင်္ပူအစိုးရရဲ့ ရှက်စရာလုပ်ရပ်တခုအဖြစ် ရှုမြင်သုံးသပ်လျှက်ရှိပါတယ်။
It isashame to read in Burmese news papers (Date: 24.09.08) that Republic of Singapore Ambassador for Burma H.E. Mr. Robert Chua Hian Kong and Singapore Association of Myanmar (SAM) Chairman Mr. Teddy Choo hand-out the donation to the most notorious drugs trafficker family member in Naypyitaw.
SAM makes the donation of 4.5million kyat to Maternal and Child Welfare Association. Vice President of MCWA Dr. Daw Tin Linn Myint receives the money. She isawife of Lt. General Ye Myint (rumor said he was sacked but then reinstated) and mother of drugs trafficker Aung Zaw Ye Myint.
Aung Zaw Ye Myint was arrested recently and caught with vast amount of drugs and some tablet making machines together with different kinds of chemical in premise of his resident. The case was later turn out as leading businessman and crony of ruling generals Maung Weik as prime accused but Aung Zaw Ye Myint name was nowhere to find.
In junta’s chief Than Shwe’s grandson drugs abuse case, Home affairs Minister Maj. Gen. Maung Oo and Police Chief Brig. Gen. Khin Yee need to name the main culprit but want to save real criminal Aung Zaw Ye Myint because he isason of their junta member so Maung Weik becameascapegoat. It was learnt through the grapevines of junta and cronies inner circle families.
Many Burmese families are deeply in trouble because of drugs abuse and drugs related cases and most of the victims are women and children. So call Myanmar Maternal and Child Welfare Association is meaningless, disqualify and just onlyashowcase of junta’s wives propagandas association. Instead of doing welfare for needed people, entertainment money use for junta’s wives is enormous and they only struggle to include their photo in newspaper so as to say they are working.
It was believed that Lt. Gen. Ye Myint isaleading person involved in junta’s sideline business of smuggling drugs inside and outside of the country. This isareason why Ye Myint is still not totally kicked out. He may not be in active post to show international communities that no drugs related person in their organization but he is still holding the Lt Gen. Post and member in Military Advisory Council to conduct the drugs smuggling activities. This isaobvious reason why his wife Dr. Daw Tin Linn Myint still in position of Vice President in MCWA
Embassy of the Republic of Singapore in Burma should know all about Lt. Gen. Ye Myint and his drugs related family. They also should know why Ye Myint is still in position. He is the main connection for drugs business in and out of country. Junta can’t abandon him.
Singapore is admired asaworld leading country of fighting the drugs and now their country’s representative is in situation of donating money to MCWA so he is to shake hand with drugs related family member. This isashame for Singapore government and disappointing for those who against the drugs and supporting the policy of Singapore’s stance on fighting drugs.
Posted by ကိုထိုက် at 22:53 15 comments
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး လှုပ်ရှားမှုနှင့် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုအား အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့သည့် ကြံ့ဖွတ် - စွမ်းအားရှင် စာရင်း
To Download these list with PDF, Click Here
Posted by ကိုထိုက် at 22:39 10 comments
စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၊ အရေးပေါ် ဆေးကုသမှုခံယူရန်၊ စကာင်္ပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်။
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ ရုတ်တရက် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးဝါးလာသဖြင့်၊ အရေးပေါ် ဆေးကုသမှုခံယူရန်၊ မနက်ဖြန် (၃-၁၀-၂၀၀၈၊ သောကြာနေ့)တွင် နေပြည်တော်မှရန်ကုန်မြို့ သို့ရောက်ရှိ၊ ညအိပ်ရပ်နားပြီး၊ (၄-၁၀-၂၀၀၈၊ စနေနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် အထူးလေယာဉ်ဖြင့်၊ စကာင်္ပူနိုင်ငံသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နေပြည်တော်စစ်ရုံးနှင့်နီးစပ်သော၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းရရှိပါသည်။ (သတင်းအတည်ပြုချက်၊ ရရှိရန်၊ ဆက်လက်စုံစမ်းလျှက် ရှိပါသည်။)
Burmese Junta Sr.Gen.Than Shwe needs immediate medical treatment in Singapore.
It was learnt from Nay-Pyi-Taw inner sources that Sr.Gen.Than Shwe was serious ill and arranging for further medical treatment in Singapore. He will arrive from Nay-Pyi-Taw to Yangon tomorrow (3/10/2008) and then to Singapore Saturday (4/10/2008) as tentatively planned. Probably his condition is quite serious that he can’t go straight to Singapore but stopover in Yangon forawhile.
Reported by Thu Ye Kaung
Posted by ကိုထိုက် at 21:56 12 comments
Beruma's Game - How to shoot down Than Shwe - published
(Click picture to Play the Game)
စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးမှာ လက်တကမ်းအကွာတွင်ရှိနေသည်။ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွန်ပြူတာတလုံးသာ လိုအပ်သည်။ ကာတွန်းဆရာ ဘိရုမာက မိုးမခ ပရိသတ်များအတွက် မြန်မာဆန်ဆန် တီထွင်ပေးလိုက်သည့် တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Beruma's Game - How to shoot down Than Shwe - published September 30th 2008
Posted by ကိုထိုက် at 12:09 12 comments
ငွေကြာယံ လူသတ် ဒမြ များ
အထက်ပါအကြမ်းဖက်မှုတွင် အဓိက အမိန့်ပေးညွှန်ကြားသူမှာ
စကခ (၄) မှ (ကြည်း/၁၅၉၂၇) ဗိုလ်မှူးချုပ် မြင့်နောင် (ယခု) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်းအုပ်(ဘုရင့်နောင်)
ခမရ (၇၀၃) မှ (ကြည်း/၂၀၈၁၈) ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုးတင့်နိုင် (ယခု) တောင်ငူ (စရဖ) (G1)စစ်ဦးစီးအရာရှိ (ပ)
(ကြည်း/၂၀၆၁၇) ဗိုလ်မှူးရွှေဝင်း တို့ ဖြစ်သည်။
လက်စေခံ လူသတ် ဒမြ များမှာ
အမှတ် (၄) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် စကခ (၄) လက်အောက်ခံ ခမရ(၇၀၃)၊ (၇၀၉)
အမှတ် (၈) ရဲတပ်ရင်းမှ ရဲတပ်သား ၁၀၀ ကျော် တို့ ဖြစ်သည်။
Monk Killers and Monastery Robbers
Bahtoo, September 25, 2008
It is reported that the Light Infantry 703 was one of the troops which attacked and crushed the Ngwe Kyar Yan Monastery in South Okala, Rangoon during the Golden Colour Revolution in September 2007. Deputy Battalion Commander Major Shwe Win and his soldier Khin Zaw Oo looted gold worth about4million Kyats, donated to the monastery by the public. Suspicions were raised when Khin Zaw Oo,alowly soldier, boughtaplot in Myine Tharyar village.
All the resident monks of Ngwe Kyar Yan Monastery were either beaten to death, tortured or imprisoned when it was attacked by Light Infantry groups 703 and 709 (both under No.4Military Operation Control Headquarters) and also over 100 police from No. 8 Police Force.
On 27 September, the angry citizens, who heard the screaming and shouting at night and also saw the monastery buildings covered in blood, and littered with broken glass and furniture, were stagingaprotest against the troops’ terrorism. In response to the protest, the troops were ordered to crush the protesters and3people were shot dead.
According to reports, Khin Zaw Oo was forced to resell the plot and the money was divided between the Battalion Commander and his deputy. The Battalion Commander Colonel Soe Tint Naing has since been promoted to First General Staff (G1) at Taungoo (sa ya pa)
The military officials, who gave the orders to terrorize Ngwe Kyar Yan Monastery are:
• Myint Naung (Brigadier General, and currently Head of the Bayint Naung Military School)
• Soe Tint Naing (Colonel)
• Shwe Win (Major)
Posted by ကိုထိုက် at 05:329comments